अस्ट्रेलियामा कृषि | Absolut यात्रा
मारुउजेन | | अष्ट्रेलिया
ओशिनियामा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण देशहरूमध्ये एक अस्ट्रेलिया हो, यो टाढाको भूमि हो जुन आज लगभग कोविड-मुक्त गन्तव्यको रूपमा देखा पर्दछ, जहाँ जीवन पहिले जस्तो थियो। वा लगभग। तर हामीलाई अष्ट्रेलियाको बारेमा के थाहा छ? हामी कल्पना गरेर सुरु गर्न सक्छौं कि जग्गाको विस्तारसँगै अष्ट्रेलियामा कृषि महत्वपूर्ण छ।
र यस्तै यो छ कि कृषि र मानिस एक अर्कासँग घनिष्ट सम्बद्ध छन् समयको सुरूवातदेखि र अष्ट्रेलियाको मामलामा जब यो युनाइटेड किंगडमको उपनिवेश भएको थियो। तर त्यहाँ कस्तो प्रकारको बालीहरू छन्, जहाँ खेतहरू छन्, जहाँ यसलाई निर्यात गरिएको छ? ती सबै आज, हाम्रो Absolut यात्रा लेखमा।
2 अस्ट्रेलियामा कृषि
हामीले माथि भनेझैं, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूको विकासमा कृषि एक महत्त्वपूर्ण गतिविधि हो, जहाँ जमिनको विस्तार विशाल छ। यहाँ परम्परागत रूपमा यसले प्रभुत्व जमाएको छ गहुँ र गाई र यो आज पनि २१ औं शताब्दीमा छ।
यो सत्य हो धेरै अस्ट्रेलियाई क्षेत्र शुष्क छ, तर सबै होइन, र अष्ट्रेलियालीहरूले स्थापना गर्न संघर्ष गरे सिंचाई प्रणाली दिनदिनै पृथ्वीको प्राकृतिक सुख्खा संग्राम को लागी महत्वपूर्ण छ। पहाड, मरुभूमि, उष्णकटिबंधीय समुद्री किनार र नुन फ्लैटहरूको बीचमा यस देशको square० लाख वर्ग किलोमिटर सतह छ।
अष्ट्रेलियामा के उगन्छ? मुख्य रूपमा गहुँ र जौ, उखु, ल्युपिनहरू (यो विश्वव्यापी रूपमा मुख्य उत्पादक हो), छोला (यो संसारमा दोस्रो हो), canola, अंगूर र कम हदसम्म खेती गर्दछ चामल, मकै, सिट्रस र अन्य फलहरू।
तर अब हामी हेरौं, अष्ट्रेलियाको कृषिका मुख्य उत्पादनहरू गहुँ, जौ र उखु हो। तिनीहरू कृषि मामिलामा उहाँलाई पछ्याउँछन् गाई, गोजी र गोजी, र यसको डेरिभेटिभहरू जस्तै डेरी उत्पादनहरू वा ऊन, भेडाको मासु, फलफूल र तरकारीहरू। गहुँ अग्रणी छ र यो सबै राज्यहरूमा बढ्छ, जहाँ देशको दक्षिण र दक्षिण पश्चिममा "गहुँ बेल्ट" छन्। तर यसको दक्षिणी गोलार्ध प्रतिस्पर्धाहरूको विपरित, देशमा मानक जाडो वा स्प्रि not छैन, त्यसैले यसको उत्पादन सेतो दाना गहुँमा केन्द्रित छ (रोटी र पास्ताका लागि) र रातो अन्न उत्पादन गर्दैन।
यो जाडो, मे, जून र जुलाईमा रोपिएको हुन्छ, र फसल कोसेन्सल्याण्डमा सेप्टेम्बर वा अक्टुबरमा शुरू हुन्छ र भिक्टोरिया र दक्षिणी पश्चिमी अस्ट्रेलियामा जनवरीमा समाप्त हुन्छ। उत्पादन अत्यधिक मशीनीकृत छ र अन्नको खेती गाईवस्तुको हुर्काउन र जौ र अन्य अन्नहरूको खेती सँगसँगै जान्छ। दुबै चीज एकै कृषि स्थापनामा काम गर्छन्।
अनाज, तिलहन बीउहरू र फलफूलहरू व्यापक मात्रामा उत्पादन गरिन्छ, दुबै मानव उपभोगको लागि र साधारण गाईवस्तुलाई खुवाउन। उखु उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रहरूमा उब्जाउ गरिन्छ र यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि महत्वपूर्ण छ, तर यो अनुदानित छैन (युरोप वा अमेरिकामा भएको जस्तो) यसको प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै गाह्रो छ, उदाहरणका लागि ब्राजिलियाको चिनी उद्योग, जुन प्रतिस्पर्धा भन्दा धेरै अगाडि छ।
क्वीन्सल्याण्डको तटमा र न्यू साउथ वेल्सको उत्तरमा वा पश्चिमी अष्ट्रेलियाको कृत्रिम सिँचाई क्षेत्रमा उखुको खेती एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ लगभग कुनै मैन्युअल श्रम छैन, सबै कुरा अत्यधिक मशीनीकरण गरिएको छ, रोपणदेखि फसल कटानी र मिलिंग सम्म।
मासु अस्ट्रेलियाको क्लासिक हो यद्यपि यसको गाई यो अर्जेन्टिनीको रूपमा प्रसिद्ध वा ब्राजिलियनको रूपमा बेचिंदैन, उदाहरणका लागि। तर यो भन्नु पर्छ ब्राजिल पछाडि दोस्रो मासु निर्यातकर्ता हो। अष्ट्रेलियाको सबै राज्यहरूमा गाईवस्तु हुर्काइन्छ र मूल रूपमा बाह्य बजारमा निर्भर गर्दछ किनकि उत्पादनको लगभग %०% निर्यात हुन्छविशेष गरी जापान, कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिका।
अष्ट्रेलियामा युरोपियनहरूको आगमन हुनु अघि यहाँ कुनै पनि विजेता थिएनन्। यो बेलायती थियो जसले केही रेस ल्याए हेयरफोर्ड, एबरडीन एंगस वा बॉस वृषभ जुन अन्ततः विजय हो कि एक हो। आज यस गतिविधि बिरूद्ध धेरै गुनासोहरू छन्, विश्वभर मा मासुको उपभोग घटाउने, शाकाहारी, पशु क्रूरता र पशु मलका कारण ग्लोबल वार्मिंग गर्ने कुरा भइरहेको छ, तर सबै एक समान छ।
र के को बारेमा भेडा? २० औं शताब्दीको s० को दशकमा गाईवस्तुहरूको संख्या ठूलो थियो, तर त्यसबेलादेखि यो घट्न थाल्यो र आज यो त्यतिबेलाको तेस्रो हो। अझै अस्ट्रेलिया बाँकी छ मेरिनो ऊन को उत्पादन मा विश्व नेता। र त्यहाँ कम र थोरै गाई उत्पादकहरू र बढी किसानहरू छन् जसले गाईवस्तुलाई अन्नको साथ जोड्दछन्।
१ th औं शताब्दीदेखि जैतुनको खेती अष्ट्रेलियामा भइरहेको छ। पहिलो जैतुनका खानाहरू क्विन्सल्याण्डको मोरेटन बेमा झ्यालखानामा हालेको थियो (याद राख्नुहोस कि यस देशको मूल दंड उपनिवेश हो)। १ th औं शताब्दीको मध्यसम्ममा त्यहाँ जैतुनका चरहरूसहित हजारौं हेक्टेयरहरू थिए र समयको साथसाथै ती बढ्न थाले। आज यो संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोप, चीन, जापान र न्यूजील्याण्डमा निर्यात गरिएको छ। जब चिनियाँहरूले अधिक जैतुन तेलको उपभोग गर्न थाले तिनीहरूले अष्ट्रेलियामा लगानी गर्न थाले ताकि यस्तो देखिन्छ कि उत्पादन बढ्नेछ।
साथै कपास बढेको छ र हामीले अघि नै भनेजस्तै, चामल, सुर्ती, उष्णकटिबंधीय फल, मकै, ज्वारी... र हो, को लागि अंगूर रक्सी उत्पादन। १ 90 XNUMX ० को दशकमा भाटिकल्चरले उछालको अनुभव गर्‍यो र लगभग आधा उत्पादन युनाइटेड किंगडममा र केही हदसम्म न्यूजीलैंड, क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका र जर्मनीमा निर्यात गरिएको थियो।
अन्तमा, यो भन्नु पर्छ कि अस्ट्रेलियाको सरकार सबै ग्रामीण गतिविधिहरूमा संलग्न छ: यसले देशको काममा पहिलो अग्रगामीहरूलाई दिएको प्रोत्साहनबाट, यसले गर्ने विभिन्न अनुसन्धान गतिविधिहरू वा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सेवाहरूले प्रदान गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार, मूल्य नियन्त्रण, सब्सिडीजस्ता संस्थालाई प्रदान गर्दछ। खुल्ला
अष्ट्रेलियाली सिनेमासँग धेरै चलचित्रहरू छन् जुन भूमिसँग व्यक्तिहरूको यस गहन कनेक्शन झल्काउँछ। यदि मलाई याद छ भने म टिभी श्रृंखला सम्झन्छु मर्नु भन्दा पहिले चराहरूले गाउँदछपुजारीलाई माया गर्ने महिला एक विशाल र धनी जमिनको मालिक थिइन्। पनि अष्ट्रेलिया, निकोल किडम्यान अभिनय फिल्म, गाई निर्माताहरु को बारे मा कुरा गर्ने; वा धेरै थप श्रृंखलाहरू जसका नायकहरू कृषि गतिविधिहरूमा समर्पित छन्। म्याक्लिओडका छोरीहरू, उदाहरणका लागि।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » अस्ट्रेलियामा कृषि
फेर्मिन सान्चेज रमीरेज भन्यो
देशको स्वतन्त्र बोल्भार विभाग कोन्डोरमार्का प्रान्तको किसान किसान समुदायको नागरिकबाट विशेष अभिवादन प्राप्त गर्दछु। यसका सबै नागरिकको संस्कृति डिग्री, टेक्नोलोजी र पानीको उर्वर भूमि उपयुक्त हुने सम्भावनाको लागि बधाई छ। कृषि र पशुपालन। यदि म तपाईलाई केही भिडियोहरू सोध्न सक्छु कृषि र पशुपालनमा टेक्नोलोजीको प्रयोगको लागि, आशा छ कि म हाम्रो पृथ्वीको अर्को छेउबाट पनि मानिसहरूसँग कुराकानी गर्न सक्छु। अलिक अलिकति भेटौं
Fermin sanchez ramiirez लाई जवाफ दिनुहोस्
कृषि धेरै रोचक छ र म स्पष्ट रूपमा हाहाहा रहन्छु
रिसलाई जवाफ दिनुहोस्
फेलिप एन्टोनियो Zatarain Beltran भन्यो
म सिंचाइ जिल्लाहरूको टेक्निफिकेसनको बारेमा जान्न चाहान्छु, विशेष गरी नहरहरूको (स्वचालित द्वार)
Felip एन्टोनियो Zatarain Beltran जवाफ